MODA | Article Detail | Tattoo အမိုက်စားတွေနဲ့ K-Idol များ
Tattoo အမိုက်စားတွေနဲ့ K-Idol များ
Tattoo တွေကတော့ တကယ့်အလန်းတွေချည်းပဲနော်
Tattoo ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အနုပညာတစ်ခုလို့လည်းဆိုလို့ရသလို ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရတွေ စိတ်ခံစားချက်တွေစုစည်းထားရာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုအနေနဲ့ရော ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရပါ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးတွေပါ Tattoo ကို စွဲစွဲလန်းလန်း ထိုးလာကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုtattoo ကို အနုပညာတစ်ခု ၊အလှအပတစ်ခုအနေနဲ့ စွဲစွဲလန်းလန်းထိုးကြတဲ့အထဲမှာ ပရိသတ်အချစ်တော် K Idol တွေလည်းအများကြီးပါ၀င်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အမျိုးမျိုး အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အမိုက်စားTattoo တွေကို ရေးထိုးထားကြတဲ့ K Idol တွေထဲကမှ အလန်းစားတက်တူးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Idol တချို့ကို ရွေးချယ်စုစည်းဖော်ပြထားတာမို့ ကိုယ့် Idol မှာ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ ဘယ်လိုTattooမျိုးတွေ ရှိနေမလဲဆိုတာ ရှာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
သူမတူဖောက်ထွက်ကွဲပြားတဲ့ဖက်ရှင်တွေနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေသည်းသည်းလှုပ်ချစ်ရတဲ့ G dragon ကလည်း အမိုက်စားတက်တူးတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ လည်ပင်းအနောက်မှာ Angel တောင်ပံဖြန့်ထားတဲ့ပုံနဲ့ ဘယ်ဘက် လက်ညိုးအောက် လက်ခုံပေါ်မှာ Smile ပုံလေးကတော့ သိသိသာသာမြင်ရမယ့်အမှတ်အသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပခုံးနောက်ဘက် ၊နံစောင်းနဲ့ ခြေသလုံးလိုမျိုးမှာထိုးထားတဲ့ တခြားTattooတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။
အမိုက်စားဘော်ဒီကြောင့် မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေအမြဲအရည်ပျော်ကျရတဲ့ J Park ကတော့ လက်ကနေ ရင်ဘတ်ထိ ဆက်နေတဲ့ တက်တူးကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အဲဒီတက်တူးမှာ စာသားတွေ ၊ခြင်္သေ့ပုံတွေ၊ရာသီခွင်အမှတ်အသားတွေနဲ့ အခြားပုံတွေအများကြီးပါ၀င်တာတွေ့ရမှာပါ။အဲဒါအပြင်ကိုမှ အခြားခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့နဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေမှာလည်း အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံတဲ့တက်တူးတွေရှိနေပါသေးတယ်။
IKON အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ B.I ကတော့ "nihilism" ဆိုတဲ့စာသားကိုရင်ဘတ်မှာထိုးထားပြီး ခါးစောင်းမှာတော့ 'like father, like son, like master, like man' ဆိုတဲ့စာပိုဒ်တစ်ခုကိုထိုးထားတာတွေ့ရမှာပါ။ညာဘက်ကျောအနောက်မှာတော့ Dreams and Hope ကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ ရောင်စုံတက်တူးလေးတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။
ခပ်ဟော့ဟော့ အဆိုတော်မလေး Hyuna ကတော့ ကျောအနောက်မှာ 'My mother is the heart that keeps me alive' ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုရေးထိုးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့မှာလည်း တက်တူးအသေးလေးတွေအများကြီးထိုးထားတာတွေ့ရမှာပါ။
ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Exo အဖွဲ့၀င် Chanyeol ကတော့ လက်ဖျံမှာ ဂစ်တာပုံတက်တူးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ချောင်းပေါ်မှာ သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေး‌ထိုးထားပြီး လက်ကောက်၀တ်မှာတော့ Exo fan club စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နေ့စွဲကိုရေးထိုးထားတာတွေ့ရမှာပါ။
Tiffany (Girl Generation)
Girl Generation အဖွဲ့၀င် Tiffany ကတော့ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာ စာသားတွေ ၊စာပိုဒ်တွေနဲ့ ဘာသာစကားပေါင်းစုံ တက်တူးအသေးလေးတွေ ရေးထိုးထားတာတွေ့ရမှာပါ။ ပြီးတော့ ပန်းပွင့်ပုံတက်တူးတစ်ခုလည်း သူမရဲ့လက်သူကြွယ်ပေါ်မှာ ရေးထိုးထားပါသေးတယ်။ တက်တူးသေးသေးလေးတွေကိုပဲ အများကြီးထိုးတတ်တာကြောင့် တော်ရုံရှာတွေ့ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။
ခပ်ပွပွလေးတွေ ဝတ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ တစ်တော့စတား "Bella Poarch" ရဲ့ Fashion Style
ခပ်ပွပွ Baggy Style လေးတွေ
2020 မှာ Biggest Tik Tok Star တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့ Bella Porach ကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ ကာတွန်းဆန်တဲ့ အမူအရာလေးနဲ့ သူမရဲ့ Tik Tok Video တွေက ပရိသတ်တွေကို အကြိုက်တွေ့စေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ဖူးကြမှာဖြစ်လို့ ဒီနေ့မှာတော့ သူမရဲ့ Fashion အကြောင်းကို အဓိကပြောချင်ပါတယ်။ Bella Porach က များသောအားဖြင့် လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Hoodie ပွပွတွေ၊ T Shirt ပွပွတွေ ဝတ်လေ့ရှိတာ သတိထားမိမှာပါ။ ဒီ Outfit နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် Sneaker တွေကို ပုံစံမျိူးစုံစီးလေ့ရှိပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကိုလည်း ပါးရဲရဲလေးဖြစ်နေတဲ့ Hungover Look လေးသာ ခြယ်သလေ့ရှိပါတယ်။ ခပ်ပွပွ Baggy ပုံစံ Style တွေကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်လို့ ခုပဲ Inspiration ယူလိုက်ရအောင်နော်။
#Tik Tok Star
#Bella Poarch Outfit
Vintage Style ကြိုက်သူတွေ Inspire ယူရမယ့် Elizabeth Harmon ရဲ့ချစ်စရာ Outfit လေးတွေ
အခုတလော Netflix မှာအရမ်း Hot ဖြစ်နေတဲ့ The Queen's Gambit Series ကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အယ်ဒီတာကိုယ်တိုင်လည်း စစသိချင်းတော့ အရမ်း Impressed မဖြစ်ပေမယ့် ဇာတ်ကားကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ဘာကြောင့်အဲ့လောက် Popular ဖြစ်နေလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတော့တယ်။ Walter Tevis ရဲ့ Novel ကိုအခြေပြုထားတဲ့ The Queen’s Gambit က ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်က ပါရမီထူးချွန်တဲ့ အမျိုးသမီး Professional Chess Player တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Elizabeth Harmon ရဲ့ဘဝအကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
သူ့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို 1960 ကာလရဲ့လူနေမှုစတိုင်နဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် Chess နဲ့ဖက်ရှင်ဆိုတာ သိပ်ဆက်စပ်မှုမရှိပေမယ့် Anya Taylor-Joy ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် Chess Champion လေး Harmon ရဲ့ 60's Outfit တွေက အရမ်း Chic ဖြစ်တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ The Queen's Gambit ရဲ့ Costume Designer Gabriele Binder ကဇာတ်ကားထဲမှာ Beth ရဲ့ Outfit လေးတွေကို Audrey Hepburn၊ Edie Sedgwick နဲ့ Pierre Cardin အပြင်အဆင်တွေကိုပြန် Inspire ယူပြီး ဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Harmon ကြောင့်ပဲ ရှေ့နောက်ပြန် Vintage ဖက်ရှင်တွေကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်။ အခုလက်ရှိ 2020 အတွင်းမှာလည်း ရှေးခေတ် Vintage ဖက်ရှင်တွေကပြန်လန်ခေတ်စားနေဆဲမို့ Vintage Style ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် Harmon ရဲ့ 60's Outfit တွေကတကယ် Inspired ဖြစ်စေမှာပါ။ Beth ရဲ့ 60's Fashion တွေတိုင်းဝတ်ကြည့်ဖို့ အများကြီး အားထုတ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိပြီးသား အဝတ်အစားလေးတွေနဲ့ Styling လုပ်ကြည့်လို့ရတာမို့ ဘာလေးတွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်။
အခုနောက်ပိုင်း Cardigans နဲ့ CropTop လေးတွေတွဲဝတ်ကြတဲ့ Look က မိန်းကလေးတွေကြားမှာတော်တော်ခေတ်စားပါတယ်။ ဒီတော့ Grandma တွေဝတ်သလို သိုးမွှေးနဲ့ ယက်ထားတဲ့ Knitted Cardigan လေးတွေက ဒီလို Top လေးတွေနဲ့မှမဟုတ်ပဲ ဘယ်လို Outfit လေးနဲ့ဝတ်ဝတ်အပေါ်ကထပ်လိုက်ရင် Look က Complete ဖြစ်သွားရော။
Turtle-Neck Sweater လေးတွေကလည်းအဲ့တည်းက အခုချိန်ထိအမြဲဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းထဲမှာရှိနေမယ့် Top အမျိုးအစားလေးတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အခုလိုဆောင်းတွင်းကာလဆို Turtle-Neck လေးတွေနဲ့ပိုပြီးတောင် Style ထုတ်လို့ကောင်းသေးတယ်။ သူက Casual Look လည်းဖြစ်သလို၊ Formal ဆန်ဆန် Occasion တွေနဲ့ဆိုရင်လည်း ပွဲတိုးပါတယ်။
ခပ်ပွပွနဲ့ Long Coat တွေက ရန်ကုန်မှာတော့ အဆင်မပြေပေမယ့် ခရီးတွေထွက်ရင် အရမ်းမိုက်တဲ့ Outfit ထဲမှာပါတယ်နော်။ Long Coat တွေကအဲ့အချိန်တည်းက မိန်းကလေးတွေရဲ့ဖက်ရှင်ကို ပိုပြီး Elegant ဖြစ်သွားစေပြီး Classic Vibe ကိုရရှိစေတယ်လေ။ ဒီလို Coat လေးတွေဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Boots လေးတွေကို သေချာရွေးချယ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်။
သတိထားမိလား။ 60's-70's girls လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် အားကစားဝတ်စုံလေးတွေဖြစ်တဲ့ Track Suit လေးတွေ၊ Polo-Shirt ကိုမှအောက်က Jersey Shorts လေးတွေ၊ Cotton Headbands လေးတွေနဲ့အရမ်း မိမိုက်နေတာကိုလေ။ ပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းပြန်ခေတ်စားလာတဲ့ Tennis Skirt လေးတွေ၊ White Sneaker နဲ့ Long Socks လေးတွေကလည်း ချန်ထားလို့မဖြစ်တဲ့ အတွဲအစပ်လေးတွေပါ။
၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှာ Peter-Pan Collar လေးတွေပြန် Trendy ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမယ်။ တကယ်တော့ အခုမှ ခတ်ထတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၅၀ ကနေ ၁၉၇၀ လောက်ထိ မိန်းကလေးတွေရဲ့ Dress တွေ Blouse တွေမှာ ဒီ Peter-Pan Collar တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ Collar လေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Well-Polished ဖြစ်တာ၊ Chic and Nicely Dressed ဖြစ်တာကိုရည်ညွှန်းတာပါတဲ့။ အဲ့ဒါကြောင့် Peter-Pan Collar လေးတွေကြောင့် Out of Style မဖြစ်စေမှာတော့သေချာပါတယ်။
Graphic Silk Shirt
60's ပျိုမေလေးတွေရဲ့ Signature Style လို့ပြောရင် Graphic Print Silk Shirt လေးတွေနဲ့ ဆံပင်အတိုလေးတွေက မပါမဖြစ်ပဲနော်။ အသားပျော့ပျော့လေးနဲ့ဝတ်လို့ကောင်းတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဖက်ရှင်ကျတယ်။ Long Jeans နဲ့ဝတ်ဝတ်၊ Short Pants လေးတွေနဲ့ဝတ်ဝတ် ချစ်စရာကောင်းနေမှာပါ။ ပိုပြီး Vintage Look လေးလိုချင်ရင် Silk Shirt လေးကို ဘောင်းဘီထဲ Tuck In လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်၊ အရှေ့အစလေးကို ချည်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ကြည့်လိုက်နော်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေဝတ်တတ်တဲ့ ပျိူမေတွေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ “Start Up” မင်းသမီး Bae Suzy ရဲ့ Outfit Style
Simple & Classics ပုံစံလေးတွေ
လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ Start Up ဆိုတဲ့ K Drama Series လေးကြည့်ပြီးသွားကြပြီလား။ ဒီကားလေးက လူငယ်တွေအတွက် အကျိူးရှိလို့ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ကြည့်ပါလို့ Editor က Recommend ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကားမှာ ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Bae Suzy ကို သိကြမှာပါနော်။ သဘာဝကျကျ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလှလို့ နာမည်ကြီးသူလေးပါ။ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုအပိုင်းမှာဆိုလည်း Simple & Classics ပုံစံလေးတွေ အဝတ်များလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးတွေ သဘောကျတဲ့ ပျိူမေတို့အတွက် Suzy ရဲ့ Outfit Style လေးတွေကို Inspiration လည်းယူရင်း ပြန်တွဲစပ်လို့ရအောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
1. T Shirt ဝတ်မယ်ဆိုရင် အရောင်လွင်လွင်လေးတွေ ရွေးချယ်ပါ။
2. Sneaker ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Blazer ကုတ်လေးတွေနဲ့ တွဲဝတ်ကြည့်ပါ။
3. အိတ်လေးတွေ ကိုင်မယ်ဆိုလည်း Suzy ရဲ့ ဘယ်တော့မှ မရိုးသွားမယ့် အရောင်၊ ဒီဇိုင်းမျိူး အိတ်တွေက Must Have ပါ။
4. အရင်ခေတ်တွေကလို ဆံပင်တွေကို ဖဲကြိုးလေးနဲ့ ချည်တာက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းနေစေမှာပါ။
5. အဝတ်အစားအရောင် ငြိမ်ငြိမ်လေးတွေက Simple & Classic Look ရဲ့ အသက်ပါ။
6. Blouse လေးတွေကလည်း ကြည့်လိုက်တိုင်း ရိုးရှင်းအေးမြတဲ့ ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေမှာပါ။
7. Jean တွေကို ဒီလို မိန်းကလေးဆန်ဆန် တွဲစပ်လို့ မရဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။
8. နောက်ဆုံး အနေနဲ့ နာရီ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး တစ်ခုပတ်လိုက်တာက ဒီ Look ကို ပြီးပြည့်စုံစေမှာပါ။
#Bae Suzy Fashion
#Simple & Classic Outfit
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Halloween Costume တွေနဲ့ Gigi Hadid တို့မိသားစု
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ Covid-19 တွေဖြစ်နေပေမယ့် Celebrity တို့ရဲ့ Halloween ကိုတော့မထားဆီးနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကအပြင်သွားသည်ဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာနေသည်ဖြစ်စေ Halloween ကတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြသွားပါတယ်။ Local Celebrity တွေကစလို့ နိုင်ငံတကာ Celebrity တွေအဆုံးပေါ့။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း Halloween ဝတ်စုံတွေအပီအပြင်ဝတ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း Halloween Make-up တွေကိုပဲအသားပေးပြီး ပြင်ဆင်ကြတယ်။ သူထက်ငါအမိုက်ဆုံး Costume တွေနဲ့ Halloween ဖက်ရှင်ကိုဖော်ကျူးကြတာလည်းသူတို့ပဲမလား။
ဒီနှစ်တော့ Gigi Hadid တို့ Family ရဲ့ Halloween Costume ကိုကြည့်ပြီး အရမ်းပဲ Surprise ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Gigi ရယ် Zayn ရယ်သူတို့သမီးလေးရယ်ကတူညီတဲ့ Theme နဲ့ Halloween Costume ကိုဝတ်တာမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Character ကိုပဲဝတ်ထားကြတာပါ။ Zayn က Harry Potter ရဲ့ Slytherin House ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပုံစံဝတ်ပြီး Gigi ကတော့ Valorant လို့ခေါ်တဲ့ Video Game ထဲက Character ကို Inspiration ယူထားတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ပါ။ သမီးလေးကိုကျ အစိမ်းရောင် Crochet Bennie လေးနဲ့ Hulk ပုံစံလေးဝတ်ပေးထားပါတယ်။ ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲနော်။ ပိုပြီး အံ့သြသွားတာက Gigi Hadid Body Suit လို Costume ဝတ်ထားတာတောင်သူ့ Body က ကလေးမွေးထားတယ်လို့မထင်ရအောင် ချပ်ရပ်လှပနေလို့ပါ။ ဒီလို Body မျိုးရအောင်ဘယ်လို လျှို့ဝှက်ချက်တွေများရှိနေမလဲ Gigi ရယ်။
ဒီနှစ် Halloween ကတော့ အမိုက်စား ဝတ်စုံတွေနဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲမို့ ဘယ်သူတွေက ဘယ် Character တွေနဲ့ ရှိုးထုတ်ခဲ့လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။
လင်မယားဖြစ်တာနဲ့ Couple Halloween ဝတ်စုံဝတ်ရမယ်လို့ဘယ်သူကပြောလဲနော်။ Woody လေး Justin Bieber နဲ့ Ratched Series ထဲက Sexy Nurse Vax Latex အဖြစ်မိုက်နေသူလေးကတော့ Hailey Bieber ပါ။
အဆိုတော်မမ Lizzo ကတော့ Kamala Harris နဲ့ Debate ပြုလုပ်နေစဉ် Vice President Mike Pence ရဲ့ခေါင်းပေါ်တက်ပျံသွားတဲ့ ယင်ကောင်ပုံစံဝတ်ထားတာပါ။
Kim Kardashian နဲ့ကလေးတွေတစ်သိုက်ကတော့ သူငယ်ချင်း Jonathan Cheban တို့က Tiger King Joe Exotic ဆန်ဆန် ကျားလေးတွေပုံစံပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။ ချစ်စရာလေးတွေနော်။
Lil Nas X ကတော့ Nicki Minaj ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ Halloween Character ကသက်သေပဲနော်။
Ciara နဲ့သူ့ခင်ပွန်း Russell Wilson တို့အလှည့်ကျ Pop ဆန်ဆန် Janet Jackson နဲ့ Busta Rhymes ပုံစံပြင်ဆင်ထားကြတာပါ။
Barb Wire ဇာတ်ကားထဲက အရမ်း Hot တဲ့ Pamela Anderson အဖြစ်နဲ့ အရမ်း Sexy ကျနေသူကတော့ Kendall Jenner ပါ။
ငယ်ငယ်က အရမ်းကြိုက်တဲ့ Iconic Hero တွေဖြစ်တဲ့ Power Ranger တွေကတော့ ဒီနှစ်မှာ Kylie Jenner တို့သူငယ်ချင်းတစ်စုဖြစ်သွားပါတယ်။
မေမေ Kris Jenner ကျ Nightmare Before Christmas ထဲကမင်းသား Jack Skellington အဖြစ်နဲ့ပါ။
ဒီအမိုက်စား Makeup Creation နဲ့ Corpse Bride လေးကတော့ Halsey ပါ။
Bella Throne ကတော့ အနီရောင်ခေါင်းစွပ်လေးနဲ့တောအုပ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ Red Riding Hood လေးပေါ့။
ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ Spider-Man နဲ့ Swan Lake တို့စုံတွဲကတော့ John Legend နဲ့ Chrissy Teigen ပါ။
#Best Halloween Costumes
သူမရဲ့ အမိုက်စား Hermès Birkin လက်ကိုင်အိတ်တွေကို ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ Cardi B
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းပြောဆိုတတ်တဲ့ စတိုင်လ်ကြောင့် သူမပရိသတ်တွေအချစ်ကြီးချစ်နေကြရတဲ့ အမေရိကန် Rapper မလေး Cardi B တစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ အောက်တိုဘာ (၁၄) ရက်က သူမရဲ့ Walk-in Closet ကြီးကို Instagram ပေါ်မှာ ပုံတင်ပြီးကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံထဲမှာတော့ မိန်းကလေးအများစု အလိုချင်ဆုံး အိပ်မက်တစ်ခုလို့ပြောရမယ့် Hermès Birkin Bag အရောင်စုံကို ရင်သပ်ရှူမောဖွယ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Hermès Birkin အိတ်တွေဟာဆိုရင် တစ်အိတ်တစ်အိတ်ကို ဒေါ်လာ သောင်းချီကစလို့ သိန်းချီအထိရှိတတ်ပြီး မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် သိန်းရာနဲ့ချီပေးရတဲ့ အိတ်မျိုးတွေပါ။ WAP သီချင်းနဲ့ ထိပ်တန်းအောင်မြင်မှူတွေကိုထပ်တိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အသက်၂၈နှစ်အရွယ် Cardi B ကတော့ တန်ဖိုးကြီးကားတွေကို ဝယ်ဝယ်ပြီးစုတတ်သလို တန်ဖိုးကြီး Hermès Birkin Bag တွေကို စုရတာလည်းဝါသနာပါပုံရပါတယ်။
Les Vegas မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ အသက် ၂၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အပြီး တင်ခဲ့တဲ့ ဒီပုံမှာ Hermès Birkin Bag၂၃ အိတ်လောက်ထိတွေ့ရပြီး တချို့ဆို တော်တော် ရှားရှားပါးပါး Collection တွေလို့သိရပါတယ်။ Hermès ရဲ့တချို့ Birkin အိတ်တွေဟာ Litmited Edition နဲ့ထွက်ရှိတတ်သလို တစ်ချို့ဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမှ အရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရှိတတ်တာမျိုးပါ။ Cardi က သူမရဲ့ Instagram မှာ “Pickacolor”(ကြိုက်တဲ့တစ်ရောင်ရွေးလိုက်) ဆိုတဲ့ Caption နဲ့ ခပ်ကြွားကြွားလေး တင်ထားပြီး သူမရဲ့နောက်က Hermès လက်ကိုင်အိတ်တွေကိုတော့ Glitter ပါတဲ့ ဒီဇိုင်းကစလို့ Bandana-print နဲ့ Camouflage Pattern တွေအထိ ရှားရှားပါးပါး ဒီဇိုင်းတချို့ကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cardi ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ဒီထဲကလက်ကိုင်အိတ်တော်တော်များများကို မှတ်မိနေကြပြီး အားလုံးသတိထားမိတဲ့အိတ်တစ်အိတ်ကတော့ အရောင်စပ်လေးတွေပါတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ $38,450 (မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀၀ နီးပါး) တန် “Sunrise” Birkin Bag ပါ။ ဒီထဲကအပြာရောင်လက်ကိုင်အိတ်ကတော့ သူမမွေးနေ့အတွက် Kylie Jenner လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၁၅ အိတ်လောက်ကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်က ကွဲမလိုဖြစ်နေတဲ့ (ခုတော့ပြန်အဆင်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့) သူမရဲ့ ခင်ပွန်းသည် Offset ကလက်ဆောင် အဖြစ်ဝယ်ပေးထားတာတေလို့သိရပါတယ်။ ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အိတ်တွေရဲ့တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသောင်းကျော်ကနေ ဒေါ်လာ တစ်သိန်းကျော်အထိ တန်တဲ့ တန်ဖိုးကြီး လက်ကိုင်အိတ်တွေချည်းပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ဒီပုံထဲက သူမရဲ့ Hermès Birkin အိတ်တွေတင်ထားတဲ့ Wardrobe တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဘယ်လောက်တောင် တန်ဖိုးရှိနေမလဲနော်။
Running Man မှာ အားလုံးက ငေးမောရတဲ့ အလှဆုံးအချိန်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Mong Ji
ပရိတ်သတ်အချစ်တော် Song Ji Hyo ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ဘူးနော်။ Running Man ရဲ့ Member တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Lucky ကောင်းသူလေး၊ ဂိမ်းတွေဆော့ရင် ယောင်္ကျားလေးတွေပါ ကြောက်ရတဲ့ Ace လေးအဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်း Running Man မှာ အဝတ်အစားပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Stylist က ကောင်းကောင်းမဆင်ပေးဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ်နော်..အရင်ကဆို Ji Hyo လေးရဲ့ အလှကို Member တွေပါ တအံ့တသြ ချီးကျူးရတာ RM Fan တွေဆိုရင် သိမှာပါ။ Opening မှာ အမိမိုက်ဆုံးနဲ့ မြင်တဲ့သူတိုင်း ကြွေရတဲ့ Mong Ji လေးရဲ့ Running Man Best Beauty Moment လေးတွေကို အလွမ်းပြေ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်နော်။
အပိုင်း ၁၀၀ မှာ Running Man Member တွေအားလုံး Suit အပြည့် သေချာဝတ်ပြီး Opening ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ Mong Ji လေးက Pink Mini Dress နဲ့ အားလုံးကို ရင်ခုန်စေခဲ့တာပါ။
မြေခွေးမလေး "Gumiho" Theme လေးနဲ့ အစကို ဖွင့်ခဲ့တာပါ။ Ji Hyo လေးက နာမည်ကြီး ကိုးရီးယားမင်းသမီးကြီးတွေအတူ Couple Race လေးဆော့ရတာပါ။ Ji Hyo လေးအလှည့် ထွက်လာတဲ့အချိန် အဖြုရောင် ဂါဝန်နဲ့ Sneaker လေးစီးပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေတာပါ။ Running Man က ယောကျာၤးလေး Member တွေတောင် သူ့အလှကို အမွှမ်းတင်ပြောဆိုလိုက်ကြပါသေးတယ်။
အပိုင်း ၁၀၀ တုန်းကလိုပါပဲ Member တွေအပါအဝင် Guest တွေပါ အမိုက်စား ဝတ်လာကြတဲ့အပိုင်းပါ။ Mong Ji တို့ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုအားပြင်းတဲ့ Black Dress လေးနဲ့ Opening ကိုလာခဲ့တာပါ။ Lee Kwang Soo နဲ့ Gary တောင် ငေးမောကြည့်ခဲ့မိတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Female Guest တွေအဖြစ် Park Shin Hye နဲ့ Lee Sung Kyung တို့ပါတဲ့ အပိုင်းပါ။ Mong Ji လေးကလည်း ရိုးရိုးလေးနဲ့ အလှပိုနေခဲ့ပါတယ်။ အဖြူရောင် Dress အရှည်နဲ့ White Heel လေးက သူမနဲ့ တော်တော့်ကို လိုက်ဖက်လှပါတယ်။ ကျက်သရေရှိလိုက်တာနော်...
ဒီအပိုင်းလေးကတော့ Gary နဲ့ Ji Hyo တို့နှစ်ယောက် Dating လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပါ။ Mong Ji လေးရဲ့ အလှကို ပရိတ်သတ်တွေကော Member တွေပါ မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ Member တွေကတောင် "လှလိုက်တာ" "Ji Hyo တော်တော်လေး လှနေတယ်" ဆိုပြီး ချီးမွှမ်းကြပါတယ်။ Gary ဆို ဘယ်လောက်တောင် ရင်ခုန်နေလိုက်မလဲနော်။
#Ji Hyo Style
Emily လို အထာကျကျ French Fashion တွေကို ဘယ်လိုဝတ်ကြည့်လို့ရလဲ
Emily In Paris ကတော့ဖက်ရှင်ချစ်သူတိုင်းကြည့်သင့်တယ်နော်
အခုတလော လူငယ်တွေနဲ့ ကောင်မလေးတွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့ Netflix Series လေးဖြစ်တဲ့ Emily In Paris ကို Editor လည်းဒီပိတ်ရက်မှာကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီ American Romantic-Comedy Series လေးကို October 2nd ကမှထွက်ရှိထားတာပါ။ Paris မှာရှိတဲ့ “Savoir” Marketing Firm တစ်ခုကို Marketing Specialist အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ American သူလေး Emily ရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။
ဒီဇာတ်လမ်းကိုထူးခြားစေတာကတော့ Emily အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Lily Collins နဲ့ ဒီ Series မှာသူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Fashion တွေပါပဲ။ Chicago ကလာတဲ့ American လေးဖြစ်ပေမယ့် Emily ရဲ့ Style နဲ့ Outfit တွေကတော့ Parisian တစ်ယောက်လိုပဲ ဖက်ရှင်ကျလွန်းပါတယ်။ Editor ကိုယ်တိုင်တောင် Series ကြည့်ရင်း Emily Outfit တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးသဘောကျရတာအမောပဲ။
Emily In Paris ရဲ့ Costume Style တွေက Sex and the City ရဲ့ Style Inspiration တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Emily In Paris ရဲ့ Costume Designer “Patricia Field” ကလည်းသူ့အနေနဲ့ Emily ရဲ့ Dreamy ဖြစ်တဲ့ Outfit တွေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပုံတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ ဒီ Series လေးက Fashion မြို့တော် Paris မှာ ရိုက်ကူးတာကြောင့်ရော Romance-Comedy ဖြစ်တာကြောင့်ရော Emily ရဲ့ Costume တွေကို ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ Eye-Pleasing ဖြစ်ဖို့ရယ်၊ Emily ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ Happy ဖြစ်တဲ့ Vibe ဖြစ်အောင်ပေးနိုင်တဲ့ Oufit တွေဖြစ်အောင် Scene တိုင်းမှာသေချာဂရုစိုက်ရတယ်၊ Trendy ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲ သရုပ်ဆောင်ရဲ့ Character ကိုတကယ်ပေါ်လွင်စေမယ့် Outfit မျိုးတွေပေါ့” လို့ Patricia ကပြောပြပါတယ်။
တကယ်လည်း Season 1 တစ်ခုလုံးမှာ Emily ရဲ့ Outfit တွေကိုကြည့်ရတာနဲ့တင်တန်နေပါပြီ။ မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်း Try ကြည့်သင့်တဲ့ New Style Inspiration လေးတွေပါပါတယ်။ Playful ဖြစ်တဲ့ ဦးထုပ်လေးတွေ၊ ရောင်တောက်တောက် Bold Color လေးတွေ၊ Pattern/Print လေးတွေက သင့်ရဲ့ အဝတ်ဗီရိုမှာ ထပ်ထည့်သင့်တဲ့ Pieces လေးတွေဖြစ်လာမှာပါ။ Emily လို Fashionista လေးဖြစ်ဖို့ဆို သူ့လိုဈေးကြီးတဲ့ အဝတ်အစားအပြင်အဆင်တွေမပါပဲလည်း ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Pieces လေးတွေနဲ့လည်း Styling လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။
ဒီတိုင်းပြောရင် Editor ကအရမ်းညွှန်းတယ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်တော့နော်။
တကယ်လို့သင့်မှာ ပန်းရောင် အဝတ်အစားလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အခုချိန်မှာ Styling လုပ်ကြည့်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ပဲနော်။ Emily ဆိုရင်ပန်းရောင်ကိုမှ ခပ်တောက်တောက် Hot Pink လေးတွေကိုပဲ ချစ်စရာကောင်းအောင်တွဲစပ်ထားတာပါ။ Barbie ဆန်ဆန်ချစ်စရာကောင်းချင်တဲ့ ပန်းရောင်အတွဲအစပ်လေးတွေကို အထူးသဖြင့် Coat တွေ၊ Jacket တွေနဲ့ Shoes တွေကို အသားပေးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Hats are Must
ပြင်သစ်တို့ရဲ့ Signature Baret Hat လေးတွေနဲ့ Bucket Hat လေးတွေကတော့ မရှိမဖြစ် Accessoryစာရင်းထဲမှာပါတယ်နော်။သူတို့က Baret လေးတွေဆိုရင်လည်း ထင်းကနဲဖြစ်နေစေမယ့် Bold ကာလာ Beret လေးတွေကိုဝတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ ပြီးသွားရင် ပိုးသား Neckscarf လေးတွေသာထပ်ဖြည့်လိုက်ရင် Oh-so-French ပဲ။
အောက်က Dress လေးတွေကို အပေါ်က Long Coat တွေ၊ Jacket တွေ၊ Cardigan လေးတွေနဲ့ အပေါ်ကနေ Layering လုပ်ဝတ်တာကလည်း Fall-Winter Season အတွက် အသင့်အတော်ဆုံး အတွဲအစပ်လေးပါ။ Emily ကတော့ အထူးသဖြင့် Dress လေးတွေ Knitted Sweater လေးတွေပေါ်ကနေထပ်ဝတ်ကြတာများပါတယ်။ Neutral လေးတွေနဲ့လိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ပိုပြီးထူးခြားတဲ့ Look ကိုလိုချင်ရင်တော့ Pattern တွေ၊ အရောင်တောက်တောက်တွေနဲ့ တွဲပြီး ထပ်ဝတ်ကြည့်ပါ။
မိန်းကလေးဆန်ဆန် Floral Print Dress လေးတွေနဲ့ Off-Shoulder Top လေးတွေကိုလည်း ချန်ထားလို့မဖြစ်ဘူးနော်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပြင်သစ်ပျိုမေလေးဖြစ်ဖို့ဆို Closet ထဲမှာ Floral Pieces လေးတွေကလည်း Must-Have နော်။
Tiffiny is Timeless
Breakfast at Tiffiny's ထဲက Adurey Hepburn ရဲ့ Iconic Little Black Dress ကတော့ အချိန်တိုင်း Elegant ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို Emily ကသက်သေပြလိုက်ပါတယ်။ Little Black Dress လေးတွေက ပွဲနေပွဲထိုင်အတွက် အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ Classic Dress အဖြစ်တည်ရှိနေဦးမှာပါ။
Chanel Bags Obssession
ဒီ 1st Season တစ်ခုလုံးမှာ Emily က Chanel Handbag လေးတွေကို Style ကျကျလွယ်ထားတာကို အားလုံးသတိပြုမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အချိန်နှစ်နာရီအတွင်း ဆန်းဆန်းပြားပြား ဝတ်စုံ (၉)စုံ လဲပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ဝိုးခနဲဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Gaga
Lady Gaga ပွဲတစ်ခုတက်တော့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိတ်သတ်တွေ စောင့်ကြည့်ရတာအမောနော်။ ပွဲတိုင်းမှာ မရိုးရအောင် ဝိုးခနဲ၊ ဝါးခနဲလုပ်နိုင်တဲ့ ဆရာမကြီးပါ။ ဒီ တစ်ခေါက် 2020 VMA Award မှာလည်း Fashion ပိုင်းကော Performance ပိုင်းမှာပါ လူတွေ ပြောစရာဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဆု ၅ဆုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီထဲက ၂ဆုကတော့ Ariana Grande နဲ့ ပေါင်းပြီး Artist of the Year နဲ့ One World: Together at Home နဲ့ Best Quarantine Performance ဆုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုလက်ခံရရှိတဲ့ Speech နဲ့ သီချင်းတွေကို မတူညီတဲ့ ဝတ်စုံတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ Lady Gaga ရဲ့ အမိုက်စား Outfit တစ်ထည်ချင်းကို လက်မလွတ်ရအောင် Article ကို ကျော်မသွားဖို့ လိုမယ်နော်။
VMA ရဲ့ Signature Moon Person ကို ပြန်ပြီး Design ထွင်ထားတဲ့ Outfit ပါ။ Muscarella က အကြည်ရောင် Helmet ရယ် Pleasers က Black Platform က အားလုံးကို သတ်ချသွားတာအမှန်ပါ။
Iris van Herpen ရဲ့ ရောင်စုံ Multi Colored Ensemble ကို ဝတ်ဆင်ပြီး ဆုတက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဝတ်စုံကို ပိုပြီးထိမိုက်သွားစေတာကတော့ Cecilio Castrillo က ပန်းရောင် Face Mask ကြီးပါ။
Christoper John Rogers
ခပ်မိုက်မိုက်၊ ခပ်ဂေါ်ဂေါ် Predator လေးကြနေတာပဲ။ ဒီအစိမ်းရောင် Ball Gown ကားကားကြီးကတော့ ရက်ရက်စက်စက်ကို လှတာပါ။ Christoper John Rogers က ဝတ်စုံဖြစ်ပြီး Lance V Moore Face Mask ကို တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Valentino က စီးကွင့်အပြည့် Body Suit နဲ့ White Feather Coat ကို ဝတ်ဆင်ထားတာပါ။ သိပ်ကို လှပလွန်းမနေဘူးလား။
Candice Cuoco က Jacket၊ Manuel Albarran က Bra နဲ့ Choker ရယ်၊ Maisonmet Mask နဲ့ Valentino Bodysuit ကို ဝတ်ဆင်ထားတာပါ။
စိမ်းပြာရောင် Latex Outfit နဲ့ အမိုက်စားဖျော်ဖြေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Full Outfit အတွက် Brand တော်တော်များများကို အသုံးပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Deadly Fetish Couture
ဆွဲဆောင်မှုပြင်းလွန်းအားကြီးတဲ့ ဒီ Outfit က Deadly Fetish Couture က အသုံးပြုထားတာပါ။
သီချင်းဖျော်ဖြေမှုအတွက် ဝတ်ဆင်သွားခဲ့တဲ့ Outfit တွေထဲက တစ်စုံပါ။ Gaga တစ်ယောက် သူချစ်တဲ့ အနုပညာအတွက် ဘယ်လောက်တောင်ကြိုးစားထားလဲဆိုတာ ဒီဝတ်စုံတွေက သက်သေနော်။
ဆုတွေအများကြီး သိမ်းပိုက်သွားတဲ့ Gaga တစ်ယောက် ပွဲအပြီးမှာတော့ Graphic Tee လေးနဲ့ Platform Boot နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အထာကျနေတာကို ဒီလိုတွေ့ရမှာပါ။
#VMA Award 2020
မြင်တာနဲ့ ကြွေဆင်းသွားမယ့် Flower of Evil ထဲက ဆံရှည်မင်းသား Kim Ji Hoon ရဲ့ ဓာတ်ပုံများ
ခုတစ်လော နာမည်ကြီးနေတဲ့ Korea Series တွဲလေး ကြည့်ပြီးပြီလား။ Flower of Evil ဆိုတဲ့ Series လေးက တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ အပိုင်းသစ်ထွက်မယ့် အချိန်ကို စောင့်ရတာအမောနော်။ မင်းသားက Lee Jun Ki ဆိုတော့ မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေများမှာ ပြောစရာမလိုပေမယ့် Villian Character အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကိုဆံရှည် Kim Ji Hoon ကိုလည်း ချန်ထားလို့မရပါဘူး။
ဗီလိန်နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်တာ ကြောက်စရာကောင်းသလောက် သူ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်သွင်ပြင်ကလည်း ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလို့နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရင်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့မတူတဲ့ Style အသစ်နဲ့ တော်တော်လေးလိုက်ဖက်ပြီး ကြည့်ကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ပိုပြီးရင်ခုန်သွားစေမယ့် အမိုက်စား ပုံလေးတွေကိုလည်း ရှိလို့ ကြည့်ဖို့အတွက် ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားကြပါ။ စွဲလန်းသွားရင် တာဝန်မယူပါဘူးနော်။
#Flower of Evil
#Kim Ji Hoon